I-Huawei Mate 30 kunye ne-30 Pro: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokwazisa ngokusesikweni | Iindaba zeGajethi
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo uphawu luqinisekisile ngokusemthethweni. Namhlanje, nge-19 kaSeptemba I-Huawei Mate 30 kunye ne-Mate 30 Pro zisiwe ngokusemthethweni. Umnyhadala wokubonisa ububanjelwe eMunich apho sikwazile ukwazi isiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina. Isiphelo esinamandla kunye nesenzelwe ukuba yimpumelelo entsha kumenzi.
Kwezi veki bekukho zonke iintlobo zamarhe kunye nezimvo malunga neHuawei Mate 30, kodwa ekugqibeleni namhlanje sikwazile ukwazi olu luhlu lutsha lwenkampani ngokusemthethweni. Njengoko kusenzeka kwisizukulwana ngasinye, inkampani isishiya nophuculo olubonakalayo, kwakhona kwicandelo lokufota kukho utshintsho.
Uyilo lwezi fowuni zimbini zihlala zifana kakhulu ukuya kunyaka ophelileyo. Kusetyenziswa i-classical more, ngakumbi inotshi, nangona ngeli xesha icekeceke kunonyaka ophelileyo, kwimeko ye-Mate 30 Pro.Ngoko ke ayilawuli isikrini sefowuni kakhulu ngale ndlela. Imodeli eqhelekileyo isebenzisa inotshi ekubunjweni kwethontsi lamanzi. Apho ungabona khona utshintsho ngakumbi ngasemva kwezifowuni zimbini, ngendlela ezifumaneka ngayo iikhamera zazo.
1 Iinkcukacha zeHuawei Mate 30
2 Ukucaciswa kweHuawei Mate 30 Pro
Iinkcukacha zeHuawei Mate 30
Okokuqala sigxila kuyon ifowuni enika igama kolu luhlu lutsha phezulu kwegama laseTshayina. Imodeli elungileyo, eneenkcukacha ezilungileyo kwaye idibana nayo yonke into esiyicelayo ukusuka kwinqanaba eliphezulu namhlanje. Akukho zikhalazo malunga noku. Ingqwalaselo eyodwa ihlawulwe ekufotweni kwifowuni, njengoko sibona kwezi modeli ziphezulu zorhwebo lwaseTshayina. Oku kukucaciswa okupheleleyo kweHuawei Mate 30:
Ukubalulwa kobugcisa iHuawei Mate 30
Umzekelo Umlingani 30
Inkqubo Kirin 990
Ezinye izinto Iscreen sensor yeminwe
Ukucaciswa kweHuawei Mate 30 Pro
Okwesibini siyifumana eyona fowuni inamandla kwesi siphelo sitsha sophawu lwesiTshayina. I-Huawei Mate 30 Pro inayo yonke into ukuba ibe yenye yeefowuni ezithengisa kakhulu kwiinyanga ezizayo. Inikwe njengefowuni enamandla, eneempawu ezilungileyo zobuchwephesha, kunye neekhamera ezintle kakhulu. Isiphelo esiphakamileyo esinokunika iimfazwe ezininzi kwintengiso. Le yinkcazo yayo epheleleyo, eqinisekisiweyo yinkampani ngokwayo:
Ukucaciswa kobuchwephesha kwiHuawei Mate 30 Pro
Umzekelo Umlingani 30 Pro
Inkqubo yokusebenza Umthombo ovulekileyo we-Android nge-EMUI 10 kunye neenkonzo zeHuawei zeSelfown
Isikrini I-OLED 6.53 intshi ngobukhulu
GPU I-ARM Mali-G76 MP16
Ikhamera esemva I-40 MP + i-40 MP + i-8 MP + i-3D ye-sensor enzulu
Conectividad I-5G / i-WiFi 802.11 ac / iBluetooth / i-USB-C / iSIM ezimbini / i-GPS / i-GLONASS
Ezinye izinto Iscreen sensor yeminwe / NFC / 3D ukuqaphela ubuso
Ibhetri I-4.500 mAh ene-40 W yokutshaja ngokukhawuleza kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo
IHuawei Mate 30 isebenzisa inzwa yangemva kathathu kwaye imodeli yePro isebenzisa iikhamera ezine kule meko. Izixhobo ezisetyenzisiweyo ziphuculwe. Ukongeza ekuphuculeni ngokubonakalayo ngokurekhodwa kwevidiyo.Ingakumbi ekurekhodeni okuhamba kancinci, okunokwenzeka ukurekhoda kwii-fps ezingama-7680 ngale modeli yePro.Ngale ndlela idlula bonke abakhuphisana nayo, ibonisa kwakhona ukuba ifemu sisalathiso kwicandelo lokufota ngomnxeba.
Ukongeza ekusishiyeni nayo yonke idatha malunga neenkcukacha zayo, uphawu lwesiTshayina luye lwabelana idatha yokwazisa kwezi Huawei Mate 30 kunye neMate 30 Pro kwintengiso. Ezi ziifowuni ezimbini ezibizelwe ukuvelisa umdla omkhulu kwintengiso. Ke ukwazi ukuba baziswa nini kwaye baya kubiza malini lulwazi olulindelwe ngolangazelelo. Ezi fowuni zimbini ziya kuphehlelelwa ngokusesikweni kwi- kwikota yesine yalo nyaka. Imihla phakathi kokuphela kuka-Okthobha no-Novemba iyaqwalaselwa, kodwa kulindeleke ukuba yonke idatha ibonakaliswe kwiiveki nje ezimbalwa. Ke siya kukuxelela ngakumbi xa kukho idatha malunga nayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » I-Huawei Mate 30 kunye ne-Mate 30 Pro: Isiphelo esiphakamileyo sihlaziyiwe